Kufunwa okokuqala ukuthi umsebenzi welanga uthinta ukuguquka kwesimo sezulu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Kuthiwa okokuqala ukuthi umsebenzi welanga uthinta ukuguquka kwesimo sezulu
IsiJalimane Portillo | | Ciencia
Siyazi ukuthi imisebe yelanga iyisici esinqumayo ekubhekaneni nokuguquka kwesimo sezulu, ngoba ngamagesi abamba ukushisa agcina imisebe yelanga ebuyisela ubuso bomhlaba emkhathini kanye nokushisa kwawo.
Kodwa-ke, kuze kube manje bekungakatholakali lokho Umsebenzi welanga uguqula inani lemisebe etholwa nguMhlaba futhi ngaleyo ndlela lidale ukuguquguquka nemithelela esimweni sezulu seMhlaba. Kwenzekani eLangeni ukusithinta?
1 Umsebenzi welanga
2 ILanga lithinta isimo sezulu somhlaba
3 Ungasiza ekulweni nokuguquka kwesimo sezulu
Iqembu labaphenyi baseSwitzerland beliphenya ukuthi imithelela yokusebenza kwelanga ingaba namuphi umthelela esimweni sezulu seMhlaba. Ngenxa yalokhu, bakwazile ukulinganisa okokuqala ithonya lenkanyezi yenkosi ekushiseni komhlaba wonke komhlaba. Phambilini kwakwaziwa ukuthi ukukhishwa emisebenzini yeLanga kungashintsha inani lemisebe yelanga efinyelela eMhlabeni. Yini ebinzima, inenjongo futhi iyinselele, Kukwazi ukwazi ukuthi lokhu kwehlukahluka kwesigameko ngemisebe yelanga kube nomthelela olinganisekayo esimweni sezulu seMhlaba.
I-hypothesis lapho ososayensi abafunde khona lo mkhuba oqale khona ibisuselwa eqinisweni lokuthi imisebe yeLanga eyayiphonsa emhlabeni idala ukwehluka okubaluleke kakhulu kunalokho esikholelwa kukho. Ngale ndlela kwenziwa umzamo wokuchaza izinguquko zemvelo ezenzekile eminyakeni eyizinkulungwane edlule kwiplanethi yethu (engahlangene nokuguquka kwesimo sezulu kwamanje, okubangelwe ngokuphelele imisebenzi yabantu ngemuva kwenguquko yezimboni).
ILanga lithinta isimo sezulu somhlaba
Umsebenzi wokucwaninga ulungiswe ngochwepheshe abavela eDavos Psychomereological Observatory, iSwitzerland Federal Institute of Aquatic Science and Technology (Eawag), iFederal Institute of Technology eZurich kanye neYunivesithi yaseBern. Ukuze kufinyelelwe esiphethweni esiqinile, kususelwa ekuhlaziyweni kwamakhompiyutha ngamanani ukwazi ukulinganisa ithonya leLanga emazingeni okushisa oMhlaba eminyakeni eyikhulu ezayo.
Ephenyweni bathole ukuthi kunesigaba lapho iLanga lalinamandla amakhulu emisebenzini yalo ngo-1950. Kodwa-ke, lo msebenzi welanga uzokwehla kungekudala. Ucwaningo lubikezela ukuthi imisebe ebuthakathaka yenkanyezi ingaba nomthelela ekwehleni okuphelele kwezinga lokushisa lomhlaba kwengxenye yeziqu.
Lapho ufunda lesi sigaba uke wacabanga ukuthi zonke izinkinga zokushisa komhlaba zizonyamalala lapho iLanga lisinika imisebe encane nokushisa okuncane. Kepha lokhu akunjalo. Lo mphumela wokunciphisa umsebenzi welanga ngeke inxephezele ukufudumala kwembulunga okubangelwa ngabantu, okudale ukwanda cishe kwesilinganiso esingaphezulu kwesisodwa kwezinga lokushisa emhlabeni wonke uma kuqhathaniswa nezibalo ezirekhodwe esikhathini sangaphambi kwezimboni.
Ungasiza ekulweni nokuguquka kwesimo sezulu
Ochwepheshe abasebenza ocwaningweni, kubandakanya nomqondisi weDavos Psychomereological Observatory nomphathi wephrojekthi, uWerner Schmutz, uveze ukuthi ukutholakala kwalokhu kwehla komsebenzi welanga "kubalulekile" futhi kungasiza ukubhekana nemiphumela yokuguquka kwesimo sezulu.
Uma inani lemisebe yelanga esiyitholayo incipha, kuzosisindisa isikhathi esincane sokwehlisa izinga lokushisa komhlaba. Kodwa-ke, noma imisebe yelanga esiyitholayo incipha, ngesilinganiso samanje sokufudumala kwembulunga yonke, nakho lokho ngeke kusebenze. Ubuye waveza nokuthi akufanele sehlise umoya ngalolu daba, ngoba ngemuva kokusebenza okuncane kwelanga, kuza okukhulu. Ngokusobala, uma kunomthamo omkhulu wemisebe yelanga futhi siqhubeka nokwandisa ukugcwala kwamagesi abamba ukushisa, kuzoba ukuzibulala kwethu ngokuphelele.
Ekugcineni, ososayensi bayakukhumbula lokho Kunzima impela ukubikezela kahle ukuthi umsebenzi wenkanyezi yethu uzosithinta kanjani isimo sezulu somhlaba. Lokhu kungenxa yokungenzeki kokukwazi ukufinyelela kuyo yonke imininingwane yokusebenza kwelanga ezigidini zeminyaka edlule noma ukuba namarekhodi okushisa kweplanethi yethu.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Kuthiwa okokuqala ukuthi umsebenzi welanga uthinta ukuguquka kwesimo sezulu
Abantu abayizigidigidi ezi-2.000 bazoba ngababaleki besimo sezulu ngonyaka ka-2100
Ungayilindela kanjani imvula ngokuziphatha kwezilwane
Bona ukukhetha kwethu ngezaphulelo ezihamba phambili